अटेरी कर्मचारी : सम्पत्ति विवरण नै बुझाउँदैनन् ! – MEDIA DARPAN
अटेरी कर्मचारी : सम्पत्ति विवरण नै बुझाउँदैनन् !
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:३७
काठमाडौं । राष्ट्रसेवामा खटिएका सरकारी कर्मचारीले वार्षिक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । भष्ट्राचारमा नमुछिउन् भनेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम बनाए पनि सरकारी कर्मचारीले अटेरी गर्ने गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई हुने कारबाही फितलो भएपछि कर्मचारीले यसतर्फ खासै ध्यान दिएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ हजार २ सय ८ सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ । अख्तियारले त्यस्ता कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ । यसरी यी कर्मचारीबाट राज्यको खातामा ८ करोड ६० लाख ४० हजार रुपैयाँ थपिनेछ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायका विकास, अस्थायी, करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिराउन र सम्पत्ति विवरण भराउन निर्देशन दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुन मातहतमा हो, त्यसैले जरिवाना उठाउनु पर्नेछ । साथै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्त पाएका व्यक्तिले जरिवानाको तिर्नुका साथै सम्पत्ति विवरण भरी पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहकाले पालिकामार्फत प्रदेशमा बुझाउनेछन् भने प्रदेश र संघले सो विवरण भरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ
“गरिब हुनबाट रोक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती भयो”